हङकङलाई हराउँदै नेपाल ट्वान्टी-२० विश्वकप क्रिकेटमा - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
by ratoपिरो · November 27, 2013
१२ मंसिर, काठमाडौं । हङकङलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै नेपालले अर्को वर्ष बंगलादेशमा हुने ट्वान्टी-२० विश्वकप क्रिकेटमा स्थान सुरक्षित गरेको छ । नेपाली क्रिकेटले अहिलेसम्म पाएको यो ऐतिहासिक सफलता हो । जितसँगै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान पनि बनाएको छ । सेमिफाइनलमा अफगानिस्तानसाग खेल्नेछ ।
खेलपछि नेपाली टोलीका कप्तान पारस खड्काले नेपालको जित ठूलो उपलब्धी भएको भन्दै यसलाई व्यक्त गर्ने शब्द नभएको बताए । सम्पूर्ण नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन अविश्वनीय रहेको भन्दै उनले भनेका छन्-’यो नेपाली क्रिकेटको ठूलो सफलता हो । यसलाई व्यक्त गर्ने शब्द छैन मसँग । हामी धेरै खुसी छौं ।’
अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा सरद भेसवाकरले छक्का हाने भने दोस्रो बलमा चार रने जोडेपछि नेपालजिततर्फ उन्मुख भयो । तेस्रो बलमा १ रन लिएका भेसवाकरले चौथो बलमा रन लिएनन् । त्यसपछि ३ बलमा २ रन चाहियो । तर, चौथो बलमा भेसवाकरले रन लिन सकेनन् भने पाँचौं बलमा १ रन लिँदै नेपालको रन हङकङको समान १ सय ४३ पुग्यो । अन्तिम बलमा १ रन चाहिएको अवस्थामा प्लेयर बक्समा रहेका नेपाली खेलाडी र खेल हेर्न उपस्थित समर्थकहरु हात जोडेर प्रर्थन गरिरहेका थिए । हसेवको बलमा सदर भेसवाकरले १ रन लिएपछि नेपालले रोमान्चक जितसँगै विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गर्‍यो ।
नेपालका लागि ४३ बलमा २ चौकासहिशत ४६ रन बनाएका पारस म्यान अफ दि म्याच बने । उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ३ चौकाससहित ३० रन जोडे भने सागर पुनले २१, सुवास खकुरेलले १६ रन बनाए । नेपालका लागि एक मात्र छक्का हानेका सदर ७ बलमा १३ रनसहित अविजित रहे । विनो भण्डारीले ७ र प्रदिप ऐरीले ३ रन बनाए ।
Next story भ्यालेन्टाइनको बिरोधमा एक घण्टामा २० लाख ब्रा बिक्रि
Previous story शिकारी मोडललाई प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट अभियान
बाँचेका मान्छेहरु…Sajha Sawal Episode: 428
कस्तो अचम्म ! गर्भ रहेपछि मात्र विवाह,
पत्याउनु हुन्छ ? एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि पाँच वर्षको उमेरमा नै विवाह !!!